ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၁) | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မနက်ဖြန်(၂၀-၂-၂၀၁၃)နေ့တွင် လွှတ်တော် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရှိပါသလား ဟု မေးခွန်းထုတ်ရန်ရှိကြောင်း၊ သို့အတွက် ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း ဂဃဏန မသိရှိသူတွေ ရိုဟင်ဂျာ အသေးစိတ်ဖြေကြားနိုင်မည် မ ဟုတ် ပေ။ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကို လွတ်တော်မှာမေးရမည့်မေးခွန်မဟုတ်။ သမိုင်းဌာနကို မေးမြန်းရမည်ရမည့်မေးခွန်းဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာအထောက်အထားများ၊ အချက်အလက် အမြောက် အများ ရှိရာ အချို့ ကိုဖတ်ရှုလေ့လာ နိုင်(လင့်) များကိုတင်ပြပေးပါသည်။၎င်းလင့်များကို အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ပါ။
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ ၀န်ကြီးဦးနု လက်အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊အသံလွင့်ရုံမှာ အသံလွင်ခြင်းစွယ်စုံကျမ်း အတွဲ(၉) မှာ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း ဖေါ်ပြထားခြင်းမေယုခရိုင်မှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကိုသီးခြား ရိုဟင်ဂျာ နေထိုင်ဒေသအဖြစ်မေယုဒေသကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ဗဟိုအစိုးရက တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခြင်း— စသော အထောက်အထားမြောက်များစွာရှိကြောင်းအသိလိုပါသည်။
ဘင်္ဂလားမှ မွတ်စလင်ဘုရင်များ ရခိုင်ပြည်ထီးနန်းကို အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခဲ့ သည့် သမိုင်းအထောက်အထားများ ရှိပါသည်။ သမိုင်းကိုမေ့ဖျောက်ပစ်၍ မရနိုင်ပါ။မွတ်စလင်မ်တို့က ဘာသာတရား၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု၊ ရိုးသားမှု၊ လွတ်လပ်သော အတွေး အမြင်၊ ကြင်နာမှုတို့ဖြင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအား စည်းရုံး ခဲ့ကြသည်။၁၅-ရာစုအစပိုင်း ၁၄၀၄-ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ဘုရင် နရမိတ်လှ (Gour)ဂေါရ်သို့ ရောက်ရှိ ခိုလုံသည်မှစတင်ကာ ဘင်္ဂလားနှင့်ရခိုင်တို့ ယဉ်ကျေးမှု စတင်ဆက်နွှယ်ခဲ့သည်။
မှတ်ချက်။ Comments များကို လူသားဆန်စွာ ရေးသားပါ။ အကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သည်ကိုသာ အဓိကထား၍ ရေးချင် ရေးကြပါ။ ရိုင်းစိုင်းပါက/ရိုင်းစိုင်းသည်ဟု ထင်ပါက သတိပေးချင်ပေးမည်။ မပေးချင်ကလဲ Ban မည်။
၁၇၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက ရိုဟင်ဂျာ အမည်နှင့်လူမျိုးရှိကြောင်း Hot News ဂျာနယ်ကချေပ …
Very Important ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည်သဘာဝအလျှောက် တိုင်းရင်းသား၊နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း၊ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသည့်စာတမ်း …
ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာမွတ်ဆလင် | ဌေးလွင်ဦး
ဒေါ်စုဖြေကြားပေးပါ။ … NLD လဲစည်းကျော်ပြီး ဘင်္ဂါလီ သုံးနုန်းတာ ကိုကန့်ကွက်ပါတယ် .
ဒေါ်စုဖြေကြားပေးပါ – (၂)။ NLD ပါတီဝင်ကဒ်ပြား၌ ရိုဟင်ဂျာ၊အစ္စလာမ်ရေးထားပြီးဘင်္ဂါလီဟု ဘာကြောင်းခေါ်သလဲ …
ရိုဟင်ဂျာများကိုဘင်္ဂါလီဟု သတ်မှတ်ရသည့်အကြောင်းရင်း …
၁၈၂၄ ခုနှစ်မတိုင်မီကတည်းက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် “ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားများ” ရှိခဲ့ကြောင်းမငြင်း နိုင်သောသက်သေအထောက်အထား …
ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးနွယ်စုသည် l၊တိုင်းရင်းသား နှင့် မြန်မာမျိုးနွယ်စု ဟုတ်မဟုတ် ဓါတ်ခွဲ စမ်းသပ်ခြင်း….
(၂၉-၁၀-၂၀၁၂)ည(၇း၀၀)ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး တွင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်း (က စ ထ၊ န ပ ခ၊ တ ပ ခ၊ န တ ခ) + ဦးလှမောင်တင်(ဝန်ကြီးချုပ်) တို့ ၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း …
၁၄ ရာစုနှင့် ၁၅ ရာစုကာလ က ရခိုင်ပြည်သည် သီးခြားမွတ်ဆလင် နိုင်ငံအဖြစ်ရှိခဲ့ …
အစွန့်ရောက်အ၀ကျွန်းသား ဒေါက်တာအေးမောင် မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ပါ။
မြန်မာ နိုင်ငံရှိ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်မ် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကံကြမ္မာ
၁၉။ -တစ်ချိန်ကရိုဟင်ဂျာအပါအ၀င်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ( ၁၄၄ ) မျိုး နှင့် နိုင်ငံခြားသားလူမျိုး ( ၂၆ ) မျိုးရှိခဲ့
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတရားဝင်ရပ်တည်ခဲ့စဉ်က ထုတ်ဝေခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာ သတင်းစာ
၂၀။ – ရိုဟင်ဂျာ Rohingya လူမျိုး (၇၊၈၊၉၊၁၀ – တန်းပထ၀ီဝင်)စာအုပ်တွင်ပြဌာန်းထား
ရိုဟင်ဂျာပြသနာ၊ လူ့ အခွင့်အရေးနှင့် အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာ။ အောင်ထူး (ရှေ့နေ)
ရခိုင်ရှေးဟောင်းကျောက်စာတွေမှာရေးထားတဲ့ ဘာသာစကား ရိုဟင်ဂျာများတို့ပြောဆိုနေသော ဘာသာစကားဖြစ် …
ဗြိတိသျှရေးတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အကြောင်း လျှို့ဝှက်အစီအရင်ခံစာ (1826)
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကတည်းက ရိုဟင်ဂျာ ဝေါဟာရ ရှိခဲ့ကြောင်းသမိုင်းအထောက် အထားအရခိုင်လုံ ………..
← အစိုးရစစ်တပ်က ကလေးစစ်သားတွေ လွှတ်ပေးတဲ့အပေါ် ကုလသမဂ္ဂ ကြိုဆို	ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၂) →